KENKAN WƆ Acholi Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Aukan Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Baoule Bashkir Batak (Karo) Batak (Toba) Betsimisaraka (Southern) Bicol Bislama Bulgarian Cakchiquel (Central) Cambodian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Chokwe Chol Chuvash Cibemba Cinyanja Croatian Czech Dangme Danish Digor Drehu Dutch Efik English Estonian Ewe Fijian Finnish Fon French Ga Garifuna Georgian German Greek Guarani Gun Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hindi Hiri Motu Hmong (White) Hungarian Ibanag Icelandic Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Javanese Kabiye Karen (S'gaw) Kazakh Kikamba Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisonge Kongo Korean Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kurdish Kurmanji (Cyrillic) Kwangali Kwanyama Lhukonzo Lingala Lithuanian Lomwe Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Macua Malagasy Malay Malayalam Maltese Mam Mambwe-Lungu Mapudungun Mauritian Creole Maya Mazatec (Huautla) Mbunda Mongolian Moore Myanmar Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Northern Puebla) Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Nepali Ngangela Nias Niuean Norwegian Nyaneka Nzema Oromo Ossetian Otetela Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Quichua (Chimborazo) Quichua (Imbabura) Romanian Runyankore Russian Rutoro Samoan Sango Saramaccan Sena Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Sesotho (South Africa) Seychelles Creole Shona Sidama Silozi Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Tagalog Tahitian Tamil Tatar Telugu Tetun Dili Thai Tigrinya Tiv Tojolabal Tok Pisin Tongan Tshiluba Tshwa Tsonga Tswana Turkish Twi Tzeltal Tzotzil Ukrainian Umbundu Urdu Urhobo Venda Vietnamese Wallisian Waray-Waray Wayuunaiki Wolaita Xhosa Yoruba Zande Zulu
NÁ ƆBAA bi a yɛfrɛ no Alexandra te bɔs bi mu retwɛn sɛ obetwa afi South America man baako so akɔ foforo so. Nea ɔtee ara ne sɛ: “Mubetumi atu bɔs no, Chinani yi deɛ ɔbɛka ha.” Osii fam sɛ ɔrekɔhwɛ nea ɛrekɔ so. Ɔnkɔhwɛ a, sɛɛ Chinani aberante bi a wɔne no te bɔs mu na sogyafo a wɔwɔ ɔman no hyeɛ so akyere no yi. Ná ɔremia n’ani sɛ ɔbɛka Spanish kasa de akyerɛkyerɛ n’asɛm mu akyerɛ sogyani no. Alexandra yɛ Yehowa Danseni, baabi a na ɔkɔ asafo nhyiam no, wɔka China kasa. Enti ɔyɛɛ sɛ ɔbɛkyerɛ aberante no asɛm ase ama no.
Aberante no kaa sɛ ɔwɔ nkrataa a ɛma no kwan sɛ ɔtena ɔman no mu, nanso akorɔmfo awia nkrataa no ne ne sika. Mfitiase no, sogyani no annye aberante no asɛm anni. Ná sogyani no adwene yɛ no sɛ gyama Alexandra mpo yɛ wɔn a wowia nkurɔfo de wɔn tu kwan no bi. Akyiri yi, sogyani no tiee aberante no asɛm. Nanso na ɛsɛ sɛ ɔkwantuni a yɛawia ne nkrataa ama ne ho akyere no yi tua sika bi ansa na wɔagyae no ama no akɔ. Ná ne ho sika nyinaa asa, enti Alexandra bɔɔ no bosea dɔla 20. Aberante no daa no ase paa, na ɔhyɛɛ no bɔ sɛ obetua ama aboro nea ɔde ama no no mpo. Alexandra kyerɛɛ mu sɛ, ɛnyɛ biribi na ɔrehwehwɛ; mmom ohu sɛ ɛyɛ ne kwan so sɛ ɔboa no, enti na ɔyɛɛ saa. Ɔmaa aberante no nhoma a yɛde sua Bible, na ɔhyɛɛ no nkuran sɛ ɔkɔ a ɔne Yehowa Adansefo nsua Bible.
Sɛ yɛte sɛ obi ayɛ ɔhɔho bi papa saa a, ɛka yɛn koma paa. Ɛkame ayɛ sɛ nnipa a wɔwɔ ɔsom ahorow nyinaa mu ne wɔn a wonni ɔsom biara mu mpo tumi yɛ papa saa ara. Wo na obi ho kyeree no saa a, anka wubeyi wo yam ayɛ no adɔe? Asɛmmisa yi ho hia efisɛ Yesu kaa sɛ: “Ɔma mu wɔ anigye pii sen ogye.” (Asomafo Nnwuma 20:35) Sɛ ɛba nyansahu mu nso a, asɛm yi yɛ nokware, efisɛ nhwehwɛmufo kyerɛ sɛ wokyɛ ade a wunya so mfaso. Yɛnhwɛ nea enti a wei te saa.
“NEA ƆTEW N’ANIM MA”
Osuahu kyerɛ sɛ, obi taa kyɛ ade a ɛma n’ani gye. Ɔsomafo Paulo kyerɛwee sɛ “Onyankopɔn dɔ nea ɔtew n’anim ma.” Kristofo a woyii wɔn yam yii sika ne nneɛma foforo de boaa wɔn nuanom gyidifo a wɔkɔɔ ahokyere mu no, wɔn ho asɛm na na Paulo reka. (2 Korintofo 8:4; 9:7) Paulo asɛm no, ɛnkyerɛ sɛ na wɔn ani agye nti na wɔyɛɛ adɔe. Mmom, adɔe no na ɛmaa wɔn ani gyee.
Nhwehwɛmu bi kyerɛ sɛ, sɛ obi ma anaa ɔkyɛ ade a, “epusuw adwene no fã a ɛma nipa ani gye, ɛma ɔne afoforo bɔ, na ogye afoforo di no.” Wei ma ne koma tɔ ne yam. Nhwehwɛmu foforo kyerɛe sɛ, “sɛ obi nya sika na ɔno ara di a ɛma n’ani gye, nanso ɔde yɛ obi papa a n’ani gye sen sɛ ɔno ankasa bedi.”
Woate nka pɛn sɛ tebea a wowɔ mu nti wuntumi nyɛ adɔe sɛnea wopɛ? Nokware a ɛwɔ mu ne sɛ, obiara betumi ‘atew n’anim ama,’ kyerɛ sɛ obetumi akyɛ ade ama n’ani agye. Sɛ yɛrekyɛ obi ade a, nea ehia paa ne adwene a ɛwɔ akyi, na ɛnyɛ ne ketewa anaa ne kɛse. Yehowa Danseni bi kyerɛwee asɛm bi kɔmaa wɔn a wotintim nhoma yi, na ɔde sika kaa ho. Ɔkaa sɛ: “Mfe a atwam yi nyinaa, Ahenni Asa so nko ara na mitumi yi ntoboa nketenkete. Mintumi nyii sika kɛse biara.” Nanso ɔtoaa so sɛ: “Nea Yehowa ayɛ ama me no dɔɔso kyɛn ntoboa a mayi no koraa. . . . Meda mo ase sɛ moama manya kwan ayi saa ntoboa yi. Akyekye me werɛ paa.”
Ɛnyɛ sika nko ara na yetumi de yɛ adɔe. Akwan pii wɔ hɔ a yɛfa so yɛ adɔe.
WOKYƐ ADE A ƐMA WO APƆWMUDEN
Woyɛ nkurɔfo papa a, ɛboa wo ne wɔn nyinaa
Bible ka sɛ: “Ɔyamyefo yɛ ne kra yiye, na otirimɔdenfo de mmusu na ɛba ne honam so.” (Mmebusɛm 11:17) Obi yam ye a, ɔkyɛ ade, na ofi ne komam nyinaa yɛ ade ma nnipa. Kyerɛ sɛ ɔwɔ nnipa ho adagyew, ɔde n’ahoɔden boa nkurɔfo, odwen nnipa ho, na ɔyɛ nneɛma foforo ma nkurɔfo. Sɛ obi te saa a, onya mfaso bebree. Wannya hwee koraa no, onya apɔwmuden.
Nhwehwɛmu kyerɛ sɛ wɔn a wotu wɔn ho ma yɛ nneɛma boa nkurɔfo no, abɛda adi sɛ wɔn ti, wɔn yam, anaa wɔn honam ntaa nyɛ wɔn yaw. Afei adwennwene ntaa nhyɛ wɔn so. Nea yɛreka nyinaa ne sɛ, wɔntaa nyareyare. Wɔn a wɔwɔ yare koankorɔ te sɛ mmubui ne HIV mpo, sɛ woyi wɔn yam kyɛ ade a, ɛboa wɔn. Nhwehwɛmu akyerɛ nso sɛ, obi pɛ sɛ ogyae asanom bebrebe, na sɛ ɔtaa yɛ nneɛma ma nkurɔfo a, ne werɛ ntaa nhow, afei ɛmma ne gyae nyɛ no den bebree.
Wɔkyerɛ sɛ nea enti a ɛte saa ne sɛ, “sɛ obi wɔ ayamhyehye, ahummɔbɔ, na ne yam ye a, onnwinnwen pii nhaw ne ho.” Obi taa kyɛ ade a, ɛtew n’adwinnwen ne mogya mmoroso so. Sɛ obi kunu anaa ne yere wu na ɔtaa yɛ nneɛma boa nkurɔfo a, ɛmma adwinnwen nhyɛ ne so nkyɛ.
Ɛyɛ nokware turodoo, wokyɛ ade a ɛboa wo ankasa.
WOKYƐ ADE A, ƐKA NKURƆFO MA WƆYƐ BI
Yesu hyɛɛ n’akyidifo nkuran sɛ: “Monkɔ so mma na nkurɔfo ama mo. Susukora pa a wɔamia so, awosow no ma abu so na wɔde begu mo ntama mu. Na susukora a mode susuw ma nkurɔfo no, ɛno ara na wɔde besusuw ama mo.” (Luka 6:38) Sɛ wokyɛ ade a, ɛtaa ka nkurɔfo ma wɔn nso yɛ biribi de kyerɛ sɛ wɔn ani asɔ. Afei, ɛma wɔn nso sua sɛ wɔbɛyɛ nkurɔfo adɔe. Bio, ɛde baakoyɛ ba, na ɛma wunya nnamfo.
Wokyɛ ade a, ɛde baakoyɛ ba, na ɛma wunya nnamfo nso
Wɔn a wosua nnipa suban ho ade kyerɛ sɛ “wɔn a wɔtaa yi wɔn yam yɛ ade ma nkurɔfo no, wɔn nneyɛe no san nkurɔfo ma wɔn nso yɛ bi.” Anokwa, “sɛ obi da ayamye soronko adi kyerɛ obi, na nkurɔfo kenkan ho asɛm mpo a, etumi ma wosuasua.” Enti nhwehwɛmu foforo kyerɛɛ sɛ “sɛ onipa baako yɛ adɔe a, ebetumi aka nnipa pii a ebia onnim wɔn mpo ama wɔn nso ayɛ nkurɔfo adɔe.” Sɛ yɛbɛka no ɔkwan foforo so a, nipa baako yɛ obi adɔe a, onii no nso bɛyɛ obi foforo adɔe, edidi mu saa ara ebetumi asan kurow mũ nyinaa. Wote baabi saa a, anka wompɛ? Sɛ nnipa bebree reyɛ papa saa a, anka yebenya so mfaso pii.
Asɛm bi a esii wɔ Florida, U.S.A. foa saa asɛm yi so. Ahum kɛse bi tu sɛe nneɛma, na Yehowa Adansefo bi tuu wɔn ho mae kɔboaa wɔn a ade ahia wɔn no. Ná wɔretwɛn nneɛma de ayɛ fie bi ho adwuma. Ɛhɔ na wohuu sɛ ban bi a obi de agye ne fie ho abu, enti wɔkɔyɛ maa no. Akyiri yi onipa no kyerɛwee krataa kɔɔ Yehowa Adansefo adwumayɛbea ti. Ɔkaa sɛ: “M’ani asɔ adwuma no paa. Mereka nnipa a wɔn yam ye paa a mahyia wɔn a, mintumi ntwa wɔn nnya.” Nea wɔyɛe no ho anisɔ kaa no maa oyii sika kɔboaa Adansefo adwuma a ɔno ara kaa sɛ ɛyɛ soronko no.
SUASUA ƆYAMYEFO A ƆSEN BIARA NO
Nyansahufo ayɛ nhwehwɛmu bi a ɛyɛ nwonwa paa. Wɔkyerɛ sɛ, “ɛkame ayɛ sɛ biribi wɔ yɛn mu a ɛka yɛn ma yɛboa nkurɔfo.” Wɔkaa sɛ, mmofra mpo “ansa na wobehu kasa koraa no, wotumi da ayamye adi.” Adɛn ntia? Bible ma yenya ho mmuae. Ɛma yehu sɛ wɔbɔɔ nnipa wɔ “Onyankopɔn suban so.” Wei kyerɛ sɛ suban pa a Onyankopɔn wɔ no, nnipa nso wɔ bi.—Genesis 1:27.
Yɛn Bɔfo Yehowa Nyankopɔn wɔ su ahorow pii a ɛyɛ fɛ. Emu baako ne sɛ ne yam ye. Wama yɛn nkwa ne biribiara a ɛbɛma yɛn ani agye. (Asomafo Nnwuma 14:17; 17:26-28) Sɛ yesua Onyankopɔn Asɛm Bible a, yebehu yɛn soro Agya no yiye na yebehu nneɛma pa a wabɔ ne tirim sɛ ɔbɛyɛ ama nnipa no. Bible ma yɛsan hu sɛ Onyankopɔn de nneɛma agu kwan mu a ɛbɛma yɛn ani agye daakye. * (1 Yohane 4:9, 10) Adɔe nyinaa fi Yehowa Nyankopɔn hɔ, na wɔbɔɔ yɛn ne suban so. Wei nti ɛnyɛ nwonwa sɛ, sɛ wusuasua Onyankopɔn na woyɛ adɔe a ɛboa wo, na wosan nya n’anim dom.—Hebrifo 13:16.
Wobɛkae a, yɛkaa Alexandra ho asɛm mfitiase no. N’asɛm no kowiee sɛn? Obi a na ɔno nso te bɔs no mu bi ka kyerɛɛ no sɛ wato ne sika agu. Nanso bere a wokoduu baabi a wɔrekɔ no ara pɛ, aberante a ɔboaa no no kohyiaa ne nnamfo bi gyee sika, na ɔde Alexandra dɔla 20 no maa no. Afei afotu a Alexandra de maa aberante no nso, otiei na ɔne Yehowa Adansefo suaa Bible. Bosome mmiɛnsa akyi, Yehowa Adansefo yɛɛ nhyiam bi wɔ China kasa mu wɔ Peru. Alexandra ani gyee sɛ okohyiaa aberante no bio. Ná aberante no pɛ sɛ ɔyɛ biribi de kyerɛ sɛ n’ani asɔ nea Alexandra ayɛ ama no no. Ná aberante no abue adidibea bi, enti ɔtoo nsa frɛɛ Alexandra ne ne nnamfo a wɔka ne ho no maa wokodidii wɔ hɔ.
Sɛ wokyɛ nkurɔfo ade anaa woboa nkurɔfo a, ɛma w’ani gye paa. Sɛ wosan boa onipa a woyɛɛ no papa no ma ohu Yehowa Nyankopɔn a akyɛde pa nyinaa fi ne hɔ no mpo deɛ a, ɛma w’ani gye boro so! (Yakobo 1:17) Wo nso, ɛyɛ a wokyɛ ade na woboa nkurɔfo ma w’ani gye saa?
^ nky. 21 Wopɛ ho nsɛm pii a, hwɛ saa nhoma yi, Dɛn na Yebetumi Asua Afi Bible Mu? Yehowa Adansefo na wotintimii. Ɛsan wɔ Intanɛt so wɔ www.jw.org/tw. Kɔ NHOMA > NHOMA NE NHOMAWA.
Monna Ayamye Adi
Yehowa nkurɔfo yam ye. Nneɛma pa bɛn na ayamye no ama wɔatumi ayɛ?
Ɛsɛ sɛ wunya ayamye ma nnipa nyinaa anaa? Enti ayamye ho hia Onyankopɔn paa?